Maxaa ka soo kordhay Wararkii Philippe Coutinho la xiriirinayey inuu ka tagayo Kooxda Barcelona? – Gool FM
Maxaa ka soo kordhay Wararkii Philippe Coutinho la xiriirinayey inuu ka tagayo Kooxda Barcelona?
(Barcelona) 17 Luulyo 2021. Kooxda Barcelona ayaa lagu soo warramayaa inay diyaar u tahay inay ceshato Philippe Coutinho inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan, iyadoo tababaraha kooxda ee Ronald Koeman uu ku faraxsan yahay inuu laacibkan sii joogo xilli ciyaareedka soo aaddan.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Brazil oo haatan ka soo kabanaya qalliin jilibka ah ayaa weli si xooggan loola xiriirinayaa inuu ka tagayo Camp Nou ka hor xilli ciyaareedka 2021-22.
Leicester City, AC Milan, Inter Milan iyo Marseille ayaa dhammaantood loo maleynayaa inay xiiseynayaan kubbadsameeyahan, kaasoo weli labo sano ay uga harsan tahay qandaraaskiisa garoonka Camp Nou.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay Shabakadda ESPN, Barcelona diyaar uma ahan inay u ogolaato xiddigan ka soo jeeda Koonfurta Ameerika inuu ku tago qiimo jaban xagaagan, mana aqbali doono sidoo kale inuu ku baxo heshiis amaah ah haddii aan qeyb ka mid ah mushaharkiisa la dabooleynin.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in sidaas darteed Coutinho fursad kale looga heli karo Barcelona, inkastoo xaqiiqdu ay tahay inuu yahay mid ka mid ah kuwa ugu mushaharka badan, kooxdana ay dhaqaale xumo haysato.
29-sano jirkaan ayaa kaliya 14 kulan saftay xilli ciyaareedkii hore dhaawac dartiis, laakiin haatan wuxuu ka shaqeynayaa sidii uu ugu soo laaban lahaa taam ahaanshihiisa ka hor xilli ciyaareedka cusub.
Kooxda Sassuolo oo ka soo jawaabtay dalabkii ay Juventus ka gudbisay Manuel Locatalli… (Miyey Juve heshay war faxad leh?)